भोट कसरी हाल्ने ? हेर्नुहोस् (भिडियो) – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय » भोट कसरी हाल्ने ? हेर्नुहोस् (भिडियो)
स्थानीय चुनावमा मत हाल्न आतुर छन्। बैसाख ३१ मा हुन लागेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारले भोट माग्नमा जति भोट कसरी हाल्नेबारे जानकारी दिने कुरामा ध्यान दिन सकेका छैनन्।
आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि एनिमेटेड भिडियो बनाइ युट्युबमा समेत राखिसकेको छ। तर सो भिडियो हेर्नेको संख्या निकै कम छ।
जबकी आगामी निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन्। यससम्बन्धी प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको मनन गर्दै मतपत्रबारे सूचना र चुनाव चिन्हबारे जानकारी प्रदान गर्न बैसाख २८ देखि ३० गतेसम्म नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनमा ६ हजार ६ सय मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता/स्वयमसेवक परिचालन गर्ने जनाएको छ।
यसअघि नै बैसाख २८ दिख ३० सम्म मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको आयोगले सोही बेला मतदातालाई मतदान कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिने भएको हो। ताजा विज्ञप्तिअनुसार, ‘नमूना मतपत्रसमेत लिएका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता/स्वयमसेवकले मतदाता परिचयपत्र लिन आउने मतदाताहरुलाई मतदान गर्ने सही तरिका सिकाउने छन्।’
मतपत्रमा सातजना उम्मेदवारका लागि आठवटा चिह्न भए पनि मतदाताले छाप भने सातवटा मात्र लगाउनु पर्छ। अन्तिमका दुई चिह्न देखेर दुई छाप लगाए त्यो मत बदर हुन्छ। यसरी मतदान गर्दा वडा सदस्यको हकमा खुलामा दुईजना निर्वाचित हुने हुँदा एक सदस्यलाई सम्बन्धित पार्टीको चुनाव चिह्न हुन्छ भने अर्को सदस्यलाई सम्बन्धित पार्टीको दुईवटा चुनाव चिह्न हुन्छ। दुवै सदस्य एउटै पार्टीको भए पनि सदस्यले भने मेरो चुनाव चिह्न एउटा वा दुईटा भनेर प्रचार गर्नुपर्ने र मतदातासँग मत माग्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै मतपत्रमा ती सातवटै पद छुट्टाछुट्टै खुलाइएको मतपत्रमा क्रमशस् अध्यक्षरप्रमुख, उपाध्यक्षरउपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य र दुईजना वडा सदस्य पदका लागि कोलम छुट्याइएको छ। संसदभित्र रहेका २७ दलले मात्रै आफ्नो दलगत चिह्न पाएका छन्। मतपत्रको पहिलो लहरमा नेपाली कांग्रेस, दोस्रोमा नेकपा एमाले, तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथोमा राप्रपा, पाँचौँमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, छैटौंमा लोकतान्त्रिक फोरम, सातौंमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, आठौँमा सद्भावना, नवौंमा माले र दसौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चिह्न राखिएको छ।
२०७३ ९ फागुन मा १८ वर्ष पूरा गरेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकेको छ। प्रत्येक जिल्लाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनेछन्। स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लागत रूपमा दर्ता भएका दलहरूको संख्याका आधारमा मतपत्रको आकार ठूलो वा सानो छन्। ७५ जिल्लाका लागि ६ आकारका मतपत्र तयार गरिएको छ।
मतपत्रमा सेतो कागजमा नीलो मसीबाट निर्वाचन चिह्न छापिएको छ। पचहत्तरै जिल्लामा फरक फरक सङ्ख्यामा दलले निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि सानाठूला गरी विभिन्न छ आकारका मतपत्र बनाइएको छ।